DAGAALKA MUJAAHID - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Iyada oo kuleylka, dhulka waxaa jira cayayaanka badan oo kala duwan. Badankooduna waxay keenaan faa'iidooyin muuqda: pollinate and cultivate dhirta. Laakiin qaar ka mid ah waxay waxyeello ka badan yihiin wanaag. Ka mid ah cayayaanka noocan oo kale ah meel gaar ah waxaa degan Khrushka. Si loo yareeyo dhibaatada ay sababto qashinkaas, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid tallaabooyinka ka hortagga ah ee wax ku oolka ah, iyo in lagu hagaajiyo habka wax looga qabanayo. Ku saabsan arrintan oo ka hadal maqaalkan.
Burbur ka soo duulaya May
Bilowgii, aynu aragno waxa cayayaankaasi ay khatar u yihiin dhirta. Waa in la fahamsan yahay in khatarta ma aha oo kaliya shakhsiyaadka qaangaarka ah, laakiin sidoo kale dirxiga. Oo midkood kastaaba wuxuu u dhintaa sida dhibicyo badan.
Cunto noocee ah ayaa laga yaabaa
Khatarta ah in caarad-qaaduhu uu sameeyo waa qaddarinta cuntooyinka cayayaanka. Its delicacy ugu weyn waa caleemaha yar yar iyo caleemaha dhirta. Haddii dukaanka noocaas ah uu ku nool yahay goob, wuxuu macno ahaan noqon karaa bil gudaheed ama labo geedka geedo yar yar ama geed.
Haddii aan ka hadlo waxa ku saabsan doorashooyinka dhadhanka, wuxuu jecel yahay inuu cuno dhirta:
laga bilaabo qurxinta: bjørk, aspen iyo kuwa kale;
laga bilaabo jirridaha: lilac, currant iyo kuwa kale;
laga bilaabo geedaha midhaha: tufaax, buckthorn badda, cherry, tubta.
Dareeraha ee lamid ah May wuxuu keeni karaa waxyeelada ugu weyn. Haddii shakhsiyaadka qaangaarka ah la ogaan karo oo looga hortagi karo cawaaqib aan loo baahnayn oo ku saabsan waxqabadyada muhiimka ah, markaa dirxiga ayaa qoto dheer dhulka, waxyeelladoodana, marka ugu horeysa, waa la ogaanayaa. Isla mar ahaantaana, hal nabar dhalaalaya ah oo da'diisu tahay saddex sano ayaa awood u leh inay xididdo xididada geed laba sano jir ah maalintii. Laba sano ayaa la qabsan kara shaqadan toddobaadka.
Haddii jiritaanka qaangaadhka qaangaarka ah uu ka badan yahay cuntada, ka dibna dhaqammo badan ayaa lagu darayaa cunnooyinka dhogorta:
xididdada geedka: kedar, geedo, geed, larch, bjørk;
berry: strawberries, strawberries iyo kuwo kale;
dalagyada khudaarta: geedo kala duwan, hadhuudh, baradhada;
caws iyo yaryar cows.
Qiimaynta cabirka khatarta ah in cayayaankaasi ay sababi karaan marxalado kala duwan oo ka mid ah horumarintooda, qof kastaa wuxuu runtii noqon doonaa mid xiiso u leh hababka wax ka qabashada dirxiga ee duqadda May. Hoos waxaa kuqoran in yar oo ka mid ah kuwa ugu caansan iyo waxtar leh.
Uruurinta dirxiga ee Khrushchev gacanta gacanta
Tani waa habka ugu jaban, sababtoo ah waxay u baahan tahay wakhti ka baxsan ninkii beerta ka shaqaynayay ama beerta. Run, tanu waa mid aad uwanaagsan. Waxaa ugu fiican in ay ku tashadaan xagaaga, marka dirxiga, dareemaya kulaylka, kor u soo dhawaado dusha sare. Waqtiga sanadkaan waa ku filan in lagu qodo qulqul qoto dheer oo ah 10-20 cm oo gacanta lagu soo saaro dirxiga. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan fahamno in dirxiga oo dhan ma awoodi doono inuu helo.
Ma taqaanaa? Inta badan, dirxiga la ururiyey waxaa loo isticmaalaa kalluumeysiga. Iyaga, iyo sidoo kale dadka waaweyn, asp, fikradda, chub waxaa si fiican loo qabtay.
Eraygani wuxuu loola jeedaa sida uu u kaco ciidda leh nitrogen hab dabiici ah. Tan waxaa lagu gaaraa by beeridda on meelaha saxda ah ee dhirta cad. Khubarada ayaa muujiyay in bakteeriyada gaar ah ay ku noolyihiin xididdada geedkaan, kaas oo ka soo nuugaya nitrogen ka soo baxa hawada, kobcinta borotiinka. Daacinta ciidda leh nitrogen, waxay u wareejisaa rhizomes ee dhirta deriska ah.
Iyo nitrogen waa jawi aad u jilicsan nolosha nolosha dirxiga ee duqsigan, iyo sidoo kale dhowr caws. Tani waa habka ugu kalsoon ee lagu xakamayn karo cayayaanka.
Bannaanka beerta iyo beertu waxay inta badan dejiyaan dabin kuwaas oo caawinaya in laga takhaluso cayayaanka qaangaarka ah. Xaaladdan oo kale, su'aasha ah sida looga takhaluso Khrushcha waxaa loo xalin karaa dhawr siyaabood:
Dabin nalka. Weelka waxaa lagu daboolaa gudaha oo leh wax aad u dheggan (oo leh jajab khafiif ah ama dufan). Laydh ama ilo kale oo iftiin leh ayaa lagu rakibay hoose ee taangiga. Dabinka waxaa la dhigaa habeenkii, oo ay ku jiraan nalka. Kaliya ma aha in duulimaadyada duulimaadka u duuli doonaan, laakiin sidoo kale cayayaanka kale, tusaale ahaan, balastar-baalal.
Dabin qabow. Dhalada laba litir oo balaastig ah ayaa la gooyaa si darbiyadu ay kor ugu kacaan 5-7 cm xagga hoose. Kudhawaad ​​ka samee afar meelood oo ay ka gudbaan xuddunta. Galka weelka ku shub kvass ama maro lagu qasi karo biyo. Tuubooyinku waxay ku xiran yihiin geedaha. Wakhti ahaan, waa in la hubiyaa oo laga nadiifiyaa cayayaanka.
Ruxashada. Inta lagu jiro mudada ugu weyn ee dadka waaweyn lagu arkay, waxaa lagu soo ururin karaa iyadoo la ruxayo geedo ama duurka. Waxaa haboon in la sameeyo tan subaxda, marka heerkulka hawada uusan weli dhaafin sumadda + 15 ° C. Heerkulkani, cayayaanka ayaa ah kuwo aan firfircoonayn, si ay si sahlan loo ururin karo ka dib xilliga dayrta. Xaaladaha la uruuriyo waxaa badanaa la siiyaa digaaga sida quudinta.
Waa muhiim! Haddii horeba, dagaalka ka dhanka ah cayayaanka, waxaad isticmaashaa sunta cayayaanka, laguma talinayo in lagu quudiyo lamidyada la soo ururiyey shimbirta. Waxay ku ururaan jirka jirka waxyeellada u keeni kara.
Soo jiidashada cadowga dabiiciga ah
Hab kale oo nabdoon oo ah in laga takhaluso cayayaanka - si ay u soo jiito goobta goobta kuwa ku quudiya May-bug.
Kuwani badiyaa waa roodhooyin, sariiro iyo shimbiro kale. Xaaladdan, caawi nudaha caadiga ah ama quudiya. Laakiin waxaa jira siyaabo kale oo lagu dabaqi karo shimbirahaaga goobtaada. Tusaale ahaan, haddii uu jiro geed bini'aad ah oo ku dul yaal, dhir fermiyo ama dhir kale oo qaro weyn ku wareegsan jirkooda. Waxay soo jiidan doontaa shimbiraha. Shimbiraha iyo tungu waxay jecel yihiin inay ku noolaadaan hareeraha duurka iyo dhirta qallalan.
Laakiin shimbiraha ayaa badi dadka waaweyn. Si loola dagaallamo karbaashka qoto dheer ee dhulka, waxaa habboon in la ogaado cidda wax ku cunaysa duqadda May.
First of dhan, kuwani waa budo, kaas oo raalli ka ah qodo iyo cunaan dirxiga.
Ma taqaanaa? Si aad u soo jiidatid duufaan goobta, waa ku filan inaad haysato qoryo qoryo ah, raso dhejis ah ama caleemo caleemo ah, laamood iyo geedo ku yaalla dhulalka qoryaha. Waxaad iibsan kartaa guri gaar ah oo soo jiidan kara raashinka. Waxaa muhiim ah in aan la siin caano dufan, xitaa la badhxo, maadaama ay u xun tahay caloosha.
Isticmaal fiyooba geedka iyo decoctions
Si loo ilaaliyo beerta iyo beerta cayayaanka waxay noqon kartaa habab dad ah. Tusaale ahaan, ku shub maraq saliid carrada. Wixii diyaarinta waxaa loo isticmaalaa diirka basasha. Hal qayb oo ka mid ah waxaa lagu shubay laba qaybood oo biyo ah waxaana la bakhtiiyey todobaad. Dareeraha soo baxay waxaa lagu qasi jiray biyo 1: 1 iyo waraabiyey ciidda fiidkii.
Su'aal kale oo ka badan si ay u sumoobaan dirxiga ee duqsiyo May, markaad u baahan tahay inaad si degdeg ah ugu soo qaadato. Xaaladdan, kiimikooyin gaar ah ayaa yimaada badbaadada. Inta badan, waxaa loo isticmaalaa daroogooyinka "Bowerin", "Aktofit", "Fitoverm" .
Waxay ku saleysanyihiin qaybaha bayoolojiga, sidaa darteed, waxaa loo tixgeliyaa si aan khatar ahayn dadka iyo cayayaanka faa'iido leh. Tusaale ahaan, waa la isticmaali karaa xitaa haddii dabiiciga ku yaal meel u dhow.
Dadka waaweyn macnaheedu waa "Antikhrusch", laakiin waxay wax ka qabtaa cayayaanka kale. Sidoo kale, looma isticmaali karo haddii ay jiri jireen berry oo ay duurka u yihiin, waxaana jira miraha dhirta, maaddaama ay muddadani burburto 45 maalmood.
Si aan loogu talaabsan tallaabooyin aad u adag, waxaa habboon in la qaado tallaabooyin ka hortag ah. Kuwa kale, kuwa ugu waxtar leh waa:
Mulching, taas oo ah, hoyga dhulka oo leh maaddooyin khaas ah oo xukuma hannaanka hawada iyo biyaha ee lakabka sare ee carrada. Qalabkani waxaa ka mid ah jilif geedeed la jajabiyey, cawska la jarjaray, jajabka alwaax, kaas oo ka hortagaya in lamaanaha laga dhex geliyo ciidda iyo ukumaha ukunta.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo sariiraha strawberry ama strawberry, grooves ayaa lagu sameeyey saf 30-40 cm qoto dheer, kuwaas oo la marsiiyey xal 75% karbofos ah.
In baaldi biyo ah (10 litir) ku dar nus baradho ah ammonia. Xalka ka dhalanaya waa sariiro la waraabiyo.
Sidoo kale dirxiga ayaa ka baqi doona caleemaha kaabajka ah ee lagu aaso dhulka, sprouts mustard. Waxaad ku beeri kartaa gawaarida, odayga, shinni, lupin ama dhirta qallalan ee sariiraha.
Waa muhiim! Beetleed oo si ikhtiyaari ah u degaya xilliga qaboobaha ee digada iyo tuubbooyinka compost. Sidaa darteed, haddii haraaga aan weli ku degeen ee, u dhow jiilaalka, waxaa fiican in ay u kala firdhiyaan farabadan - dirxiga ma u dulqaadan qabow. Laakiin way ka fiican tahay in la geliyo filim caag ah oo horey loo sii wado, taas oo aan u oggolaan doonin in cayayaanka la qodo ciidda xilliga jiilaalka.
Sida aad arki karto, cockchafer wax badan ayuu waxyeelo u geystaa, laakiin waad la dagaallami kartaa. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo looga saari karo goobta. Qaarkood waa kuwo qaali ah, kuwa kalena way khatar yihiin, laakiin mar walba waad heli kartaa midda saxda ah. Si kastaba ha noqotee, si aad u ilaaliso dalaggaaga, waxa fiican inaad qaaddo tallaabooyin ka hortag ah waqtiga.